China Vehicles Nkedo akụkụ ụlọ ọrụ nrụpụta na ndị nrụpụta | Ọla & Injinia
Na ihe karịrị afọ 30 nke ngwaahịa exporting ahụmahụ / elu àgwà na nlezianya oru QA otu / ịzụlite ọnụ na ndị ahịa na-eto ọnụ echiche, anyị nweta a mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ, na-enweta ezi aha na ụwa-n'obosara ahịa.
Castigs ihe: Igba ígwè, Ductile Iron, alloy ígwè, Carbon ígwè, Alloy Steel, igwe anaghị agba nchara, Brass, Ọla, aluminom, ……
Nkedo usoro anyị na-eji: Green ájá mgbatị, Resin ájá mgbatị, Shell ebu nkedo, Investment oge ọgbụgba (Water-iko mgbatị, Silica-Sol mgbatị, Echefuola ụfụfụ mgbatị), na-adịgide adịgide ebu, anwụ mgbatị, Auto-ịkpụzi akara, wdg.
Gray ígwè & Ductile iron ọgbụgba: 6000-10,000mts / afọ
Nkedo ígwè: 3,000MT / afọ.
Igwe anaghị agba nchara mgbatị: 800 MTS / afọ
Non-ferrous metal nkedo:
Ọla kọpa, Brass & Nickel Bronze: 400 MTS / afọ
Aluminom: 500 MTS / afọ
Ejiri SPECTROMAXX, / Spectrograph 2D Vedio Measure / Rough meter meter Altimeter / Nnwale-ule / ule nrụgide / CMM
Ngwá ọrụ nyocha na nlele na-enyocha ụlọ ọrụ pụrụ iche kwa izu.
Enwere IPQC 、 Usoro nyocha na nyocha ikpeazụ iji chịkwaa ogo.
Anyị ji n'aka na anyị elu àgwà ngwaahịa na magburu onwe ọrụ ga-adọta ndị ọzọ na ndị ọzọ ahịa 'ekele. Ackpọtụrụ anyị bụ ihe mbụ ị ga-eme iji soro anyị nwee mmekọrịta azụmaahịa na-aga nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ. Anyị na-atụ anya iso gị rụ ọrụ n'ọdịnihu dị nso.
Nke gara aga: Akụkụ Valve
Osote: Igwe anaghị agba nchara oge ọgbụgba